5 desambra 2010 – Advento II – FJKM Ambavahadimitafo 5 desambra 2010 – Advento II |
5 desambra 2010 – Advento II
Publié le 05 décembre 2010 à 01:12
Avy amin’Andriamanitra na izay antsoina koa hoe JHWH na izay lazaina eto fa Jehovah; Ilay Izy hatrizay hatrizay ka ho mandrakizay ny famonjena. Ny teny hoe Jesoa dia avy amin’ny fakanteny hoe Josoa ary midika hoe Mpamonjy. Tokana ihany ny Mpamonjy lazaina na i Jehovah na i Jesoa ary voalaza fa Andriamanitra i Jesoa; Ilay voahosotra hamonjy izao tontolo izao. Araka ny lovantsofina jiosy dia tsy mba nantsoina hoe Mpamonjy i Jehovah raha tsy avy niaina ny traikefan’ny fanafahana tany Egypta ny Zanak’Israely. Ny Salamo faha 121-122 dia nosoratana teo anelanelan’ny taona 1000 sy 400 talohan’i Jesoa Kristy izany hoe taorian’ny fandosirana ny tany Egypta; ary avy amin’ny traikefan’ny finoana fa Mpamonjy Jehovah no nahazoana nanangona ny tahirintsoratra narafitra ho Bokin’ny Genesisy (voasoratra 400-300 Tal JK) ka nahafahana nanamafy fa Ilay Mpamonjy dia tsy iza tsy akory fa Ilay Mpahary. Izany no ilazan’i Davida fa Ny famonjena antsika dia avy amin’i Jehovah, Mpanao ny lanitra sy ny tany. Saingy tsy tamin’ny lasa ihany ny famonjena fa ilay manatona sy avy koa. Moa tsy izany ny iomanana amin’ny Advento? Dia ny fandraisana Ilay fanomezana avy manatona antsika? Hoy ny ohabolana alema: Ny fifaliana mialoha sy eo am-piandrasana no fifaliana feno indrindra (Vorfreude ist die beste Freude). Miara-manaiky isika fa tapitra ny 25 Desambra ny fifalian’ny Krismasy ary raha tahiny mateza dia ny alahady aorian’io. Fa azo aroso mialoha ny fifaliana dia atomboka amin’ny Advento ka ho tsapanao ny fifalian’ireo izay niomana hankalaza an’Andriamanitra tany Jerosalema fehizay. Moa tsy eto Ambavahadimitafo ny Jerosalema-ntsika ka ankalazana an’Andriamanitra ny 24 – 25 – 26 Desambra? Hoy isika mamaly hoe : FALY aho, raha hoy izy ireo tamintsika hoe: Andeha isika ho any an-tranon’i Jehovah. Salamo 122 : 1.